Bandhig Faneed Faneed - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Ku soo dhowow Dugsiyada Minnetonka markii ugu horreysay Bandhig Faneed Faneed!
Bandhigga Farshaxanka ee Dugsiyada Minnetonka waa xaflad sannadle ah oo lagu soo bandhigo farshaxanka Degmadeena. Hubi boggan badiyaa si aad u daawato ardayda bandhigyada farshaxanka, riwaayadaha masraxa, riwaayadaha iyo waxyaabo kale oo badan! Sannadkan, si aan u taageerno kala fogaynta bulshada oo aan u maamuusno ardaydeena cajiibka ah, waxaan u gudubnay ururinta shaqooyinka meeraha ah
Duubista Riwaayadda Online-ka ah ee MMW Fasalka 8aad
Ardayda dhigata MMW 6aad iyo 8aad waxay abuureen riwaayad khadka tooska ah ka sameysan oo ay ku qorayaan qoraalo barnaamijyo ah, kuna garaacayaan goobahooda riwaayadaha, ka dibna ay isla dhigayaan bandhig. Xitaa waxay u labbisteen munaasabadda! Labada cajaladood waxaa ku jira fasallada 8-aad Andy Petouvis iyo Annabelle Fung.
Guri laga tagay
Ardayda muusiga Clear Springs waxay u direen duubis shaqsi ah macalinkooduna wuxuu isku darsaday si uu ugu dhawaaqo koox isku mid ah. Briley Hanson waa kaaliyaha ardayga.
Harry Potter Mowduuca
Kali violin oo ay sameysay Cleg Springs Elementary Maggie Kocher
Qeybta violin oo ay sameeyeen ardayda Clear Springs Elementary Maya Johnson, Maya Godfrey, Oliya Khamseh, iyo Alana Briggs oo si dijitaal ah isugu dhafan.
Dhageyso Mowduuca Aargoosadka
Dhulkani waa Dhulkiina
Harmonica solo oo ay fuliso Clear Springs Elementary Nikki Burdette
Toddoba Ciidan Qaran
Gitaar kali ah oo uu qaado Clear Springs Elementary arday Nathan Corbusier
Violin solo oo ay sameysay Clena Springs Elementary Elena Songstad
Violin solo oo uu sameeyay Clear Springs Elementary arday Audrey Hauser.
Aiden Griffin wuxuu u sameeyay qoyskiisa waxqabad muuqaal ah waxqabadka fasalka labaad ee Clear Springs. Wuxuu qaadayaa heesta la yiraahdo "Raadiyaha." Wuu soo labistay oo wuxuu soo saaray saanado reerkiisa ah.
Emily Ambrose (Clear Springs) ayaa gabay ku duubtay rikoorka "Twinkle, Twinkle Little Star." Waxay ku baratay sida loo ciyaaro F # heestaan. Emily waxay dhago-dhagax ku duubtay duubisteeda intii lagu jiray barashada E-learning.
F Major iyo C7 Major on Ukulele
Mira Barnes (Clear Springs) waxay soo gudbisay meeleyn ah ukulele si ay u muujiso inay ciyaari karto F Major chord iyo C7 Major chord.
Qaybta Asalka ah
Giabella Klobucar ayaa qortay gabalkan asalka ah waxayna ku wehelisaa biyaano. Gia waa fasalka afraad ee Clear Springs sannadkan.
Kali violin qalafsan oo uu ciyaaray Clear Springs Elementary arday Kyle Drew.
Dhageyso Bach Minuette
Taksi Jaale Weyn
MHS Waayeelka Gabby Jore iyo Emma Tripp waxay qabtaan "Big Yellow Taxi" oo uu sameeyay Joni Mitchell.
Sophia Thieringer iyo Elizabeth Smith, oo labaduba dhigta fasalka 5aad ee Clear Springs, ayaa si wada jir ah u sii wadaya tababarkooda orkestra Toddobaadkan waxay ku baashaalayeen sameynta hees ka mid ah heestii ay jeclaayeen ee Taylor Swift, "Waraaqaha Waraaqaha."
Ha Ha (laga bilaabo Qaboojiyay)
Cello kali ah oo ay fuliso Clear Springs Elementary Evangeline Fung
Mawduuca Champion Biek
Ardayda qaar waxay ku qorayaan muusikadooda, qalabkooda, ama si elektaroonig ah GarageBand. Waxaa halkan ku lifaaqan hal hees oo arday laga sameeyay ipad-kooda.
Dhageyso Mawduuca Biek Theme
Qolka Kafee ee MHS
Ka fiiri @ tonka.coffeehouse Instagram-ka fiidiyowyada ardayda Dugsiga Sare ee Minnetonka oo wax ka qabanaya Naadiga Coffeehouse Club
Dhegeyso Selah Tan oo ka socda Heerarka Muuqaalka ah ee Jingle Bells ee Cello.
Soo Degso Clip Audio
Dhageyso Jonah Harad oo ka socda Scenic Heights Elementary School oo ciyaaraya saxophone.
Arday badan ayaan awoodin inay muusiggooda muusig ka dhigaan riwaayad toos ah. Taabadalkeed, waxay duubayaan xubnahooda shaqsi ahaaneed waxayna u dirayaan kuwa gudaha loogu darayo maqal ugu dambeeya oo u eg waxqabad isku mid ah.
Dhageyso Burcad Badeed
Bandhig Faneed Faneed
Mackenzie wuxuu ku lug lahaa 19 soosaarid masraxa Minnetonka isagoo ah jilaa, agaasime arday iyo xubin shaqaale. Waxay ahayd mid ka mid ah waayeelka ku hawlan soo saarista Bandhigga Tiyaatarka Arday ee ugu horreeyay abid Minnetonka dayrtaan la soo dhaafay. Mackenzie wuxuu hada go'aaminayaa inta udhaxeysa BFA-da Emerson College ee Boston ama Jaamacada Minnesota, Duluth. Fiidiyowgan, Mackenzie wuxuu ku qaadayaa hees la yiraahdo Dust iyo Ashes oo ka timid muusikada ay ugu jeceshahay, Natasha, Pierre iyo Great Comet ee 1812.
Elliot wuxuu ciyaaray doorka Dandy Dan ee soosaarka MME ee Bugsy Malone. Nasiib darrose, orodkii waa la gaabiyey ka dib hal ciyaar oo keliya. Waa kan Elliot oo heesaya oo qoob ka ciyaaraya goos gooska laga soo bandhigayo tababarka labbiska.
Nate wuxuu ku guuleystey Waxqabad Wanaagsan doorka hogaaminta waxqabadkiisa sida Charlie Chaplin ee MHS Fall Musical, Chaplin the Musical. Isagu sidoo kale waa Finalist abaalmarinta sumcadda leh ee 'Hennepin Theater Trust SpotLight Triple Threat Award'. Waa kan Nate's audition audition ee Abaalmarinta Triple Threat, oo ka heesaya "My Petersburg" oo ka socda muusigga Broadway ee Anastasia:
Muusigga Man CARRUURTA (Ilo nadiif ah)
The Clear Springs Hoose aasaasiga ah ee Muusikada Man KIDS oo sameeya "The Wells Fargo Wagon"
Muusikada Man KIDS (Groveland)
Qeybta Hoose ee 'Groveland Elementary' ee Muusigga Man KIDS waxay si wada jir ah u wada shaqeeyaan!
Kartida Groveland ee muusikada Muusikada Man KIDS waxay qabataa "Iowa Stubborn."
"Ha U Baxdo" (MMW)
Kooxda hibada leh ee Frozen Jr. ee Minnetonka Middle School West waxay ku heesaan heesta caanka ah ee "Halooga tago" waxsoosaarkoodii guga.
LIVE DHACDO: Tiyaatarka Minnetonka wuxuu soo bandhigayaa hal habeen oo kaliya, akhriska tooska loogu sii daayo ee 2020 MHS Competition One Act Play, The Glass Menagerie ee Tennessee Williams Jimcaha, May 15 markay tahay 7 fiidnimo si aan u maqalno riwaayadda oo ay si aqrin ah ugu akhriyaan jilayaasha ardaydeena.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga heli karaa https://www.facebook.com/minnetonkatheatre/
Cusboonaysiinta ka socota Tiyaatarka Minnetonka
Tiyaatarka Minnetonka wuxuu qabtay xaflad macmal ah "Xafladii Habeenkii ee Furitaanka" habeenka furitaanka ee muusikada guga. 90+ arday iyo shaqaale ayaa isugu yimid Google Hangouts si ay u xusaan munaasabada. Ardayda waxaa laga codsaday inay guryahooda ku labistaan (dhaqanka habeenka u furan) oo ay sawiradooda u soo gudbiyaan si ay warbixin toos ah uga muuqato "roog cas".
Sawirro iyo cusbooneysiin ka socota Tiyaatarka Minnetonka waxaa laga heli karaa https://www.facebook.com/minnetonkatheatre
Bandhig Faneedka Dijital ah
Eeg barnaamijka farshaxanka dhijitaalka ah ee 'Minnetonka Elementary and Middle School'.
Eeg Bandhigga Farshaxanka elektaroonigga ah ee Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Booqo Bandhigga Farshaxanka ee MHS e-Learning